Sonke uthando itiye. Othile ukuphuza eyodwa mug ngelanga, omunye at 5-10. Kuyaqondakala ukuthi ukuthengiswa itiye - kuwusizo. Kodwa kwenzeka kanjani ukuba sihluke neminye imikhiqizo?
Okokuqala, kuba umkhiqizo ukudla, okusho it is ngokushesha wachitha futhi ikhasimende bayothenga ngokuphindaphindiwe. Kodwa, ngokungafani nezinye imikhiqizo iningi, itiye ingagcinwa iminyaka, futhi ngenxa yalokho, ungakhathazeki ngokuthi ngeke ukuwohloka ngokushesha.
Kepha thina asisibo nesithakazelo kule itiye evamile. Namuhla kuyinto ngokucijile kakhulu itiye vogue Chinese, ezifana Da Hong Pao, Puer futhi tiguanin. Blame salokhu kwaba rapper Nagano, owabhala ithrekhi ngokuthi "isimo esiphuthumayo" (itiye abaphuza). Ngokusho kwakhe, leli tiye kuvuselela, like-amphetamine, noma okuphambene nalokho, uphumule kakhulu. Njengoba ungacabanga, lokhu ihaba ukuqhathanisa kakhulu, futhi eqinisweni, itiye umphumela akuyona okuningi ezahlukene kusukela ikhofi eqinile. Nokho, kwaba ethandwa.
Ngakho-ke, isinyathelo ezifanele kungaba ukuthi uthathe isikhashana futhi nje adayise itiye Chinese. Manje ake step by step Bheka ukuthi yini wena okudingeka uyenze.
Ngenxa yalesi siphendukela internet, kukhona egcwele ongakhetha. I ekahle kungaba bavumelane supply itiye ngokuqondile eChina, nge okungenani abaxhumanisi. IsiShayina ukwazi lokhu akwenzeki ngokwanele abahwebi okhuluma isiRashiya.
Kuyinto engenzeka ngempela akunzima. Ngokusho umbuzo onjalo kakade utlole eningi izihloko ewusizo kwi-inthanethi, kodwa short, ungakwazi bahlukanise izindlela ukuthola amakhasimende ekhokhelwayo futhi mahhala. Inkululeko yokuzikhethela indlela elula ukwakha iqembu thematic VKontakte bese umema abantu lapho. By endleleni, ngakho Ngathola oda wami wokuqala, futhi ngosuku ukudalwa iqembu. Yezindlela ikhokhwe okungcono kakhulu esinakho iwukusebenzisa zesimo ukukhangisa Yandex okuqondile ne-Google advords. Ukuze uthole olunye ulwazi ungathola ngosizo isicelo olufanele.
Ngokomthetho ibhizinisi itiye.
Ngemva kokuthola indawo yemali yokuqala njengendlela IP efiselekayo agweme imibuzo engabheke ndawo kusukela iziphathimandla zentela.
Ekuqaleni, kuze ungenayo oda amaningi kakhulu, ungaletha ngokwakho. Kodwa uma ungenayo isikhathi, ukuqasha courier. Ukuze wenze lokhu, nje uthumele izikhangiso kusayithi umsebenzi noma ukubhala iforamu ku idolobha lakho. Courier ungakwazi ukukhokha 5-10% yenani oda.
Empeleni, lo yikho konke okudingayo ukuze uqale. Uma ngempela abe yisifiso sokwenza imali kwi itiye nge-Internet, ingabe Ngomzamo omncane nje, une amasonto amabili ungathola oda 3-5 ngosuku. A Ngemva kwezinyanga ezimbalwa, nawe ungase uye ngokuya ezingeni nomholo, okuyinto uyoyinikela wazikhandla ngokugcwele kwebhizinisi ukuyeka umsebenzi wakho, uma ufuna it.
Ufuna ukufunda mayelana abahola kwi-inthanethi ukuthi kufanele ufihle? Ulapha: 7mif.ru